Super Mario Run inomutsidzirwa nekuwedzera nyowani yakapfava modhi | IPhone nhau
Kana imwe nguva mhedzisiro yekuburitswa chete kweiyo iOS yeSuper Mario Run yadzora, mutambo unosvika munaKurume pane Android chikuva (isu tichaona kana nekutenga-mukati-app kana nekutenga kamwe chete kwema9,99 euros), iyo kambani yeKorea yatora mukana wekuvandudza mashandisirwo ayo nekuwedzera mitsva sarudzo nemitambo modhi. Ivo vakomana paNintendo vakawedzera nyowani yakapusa modhi, uko muganho wenguva nemabhuru asina muganho unobviswa. Asi mukuwedzera chiitiko chitsva chakawedzerwawo. Zviripachena kuti iyo kambani inoda kuenderera ichiita kuti iyi application ibatsire, mwedzi mumwe mushure mekutanga kwayo, Iri pazasi pemakumi mashanu epamusoro-anowana maapplication paApp Store
Pamusoro peiyo nyowani yakapfava modhi uye chiitiko chitsva, mune ino yekuvandudza nhamba yeToads inorasika mune chiitiko chekukundwa mumijaho yakadzikiswa, zvichiita kuti zvive nyore kuvatsvaga. Izvo zvakare zvinoita kuti ugamuchire iyo yeToad mubairo kubva kuNintendo yangu kakawanda kuitira kuti zvikwanisike kuwana Toad zvakare kana zvikaitika data remushandisi raizove rakadzimwa.
Kambani yeJapan ichangoburitsa zvawanikwa zvegore rega, mhedzisiro yazvinetsa nekudzama kana tichitaura nezve Super Mario Run. Zvinoenderana nekambani, mutambo uyu wakadzorwa 78 mamirioni nguva kubvira payakatangwa muna Zvita 15 pasirese. Izvo zvakare zvinovimbisa kuti vanopfuura mashanu% evashandisi vakavhura ese mazinga emutambo vachishandisa iyo yakasanganiswa kutenga iyo ine mutengo we5 euros uye iyo yakasimudza kufungidzirwa kwakawanda pakati pevashandisi.
Pasina kudoma nhamba chaiyo kana muzana revashandisi vakaita kutenga mutambo wese, Nintendo inoti yawana mari inodarika $ 53 miriyoni yeSuper Mario Run kubvira payakatangwa. Mavhiki mashoma apfuura, Nintendo yakatanga ongororo mavhiki mashoma apfuura pakati pevatengi vayo maakabvunza kuti mutengo wakakodzera wemutambo ungadai wakavei, ndeapi matanho avakanyanya kufarira uye kana vaizoda kuti paite sequel. Zviripachena kuti kambani iri kuongorora musika usati watangwa paApple uye isati yavapo yechipiri vhezheni yemutambo weIOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Super Mario Run iri yoku- nokuwedzera itsva nyore muoti
Portrait mhedzisiro yeiyo iPhone 7 Plus pane chero imwe iPhone, zvinogoneka nekuda kweizvi maapp